ငါတို့ကိစ္စအတော်များများမှာပြောပြီးပြီ ထောက်လှမ်းရေး နှင့် အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများပေါ်လွင်စေမယ့်သုတေသနတွေကိုတောင်ဖော်ပြတယ် အရေးကြီးသောကွဲပြားချက်အချို့.
သို့သော်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သတိပြုရန်မှာမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်သည် သီအိုရီတည်ဆောက်မှုနှစ်ခု၏အဓိပ္ပာယ်များအကြားထပ်နေသောအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိသည်; ဥပမာအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်များကိုအမျိုးမျိုးသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများဖော်ပြချက်များတွင်စနစ်တကျသုံးသည်။ သို့သော်လည်းဤစွမ်းရည်နှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံမှန်အားဖြင့် "အသိဥာဏ်" ဟုသတ်မှတ်လေ့ရှိသောအပြုအမူများကိုရှင်းပြရာတွင်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများအတွက်စမ်းသပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစာရေးသူကပိုရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များမှတဆင့်သူတို့ကိုအကဲဖြတ်သောစမ်းသပ်မှုများ (ဥပမာ၊ Wisconsin ပြည်နယ်ကဒ်အမျိုးအစားခွဲခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟနွိုင်းမျှော်စင်) သူတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ခိုင်လုံမှုမရှိပါမရ။ ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လူသိများတဲ့ကြိုးစားမှုတွေထဲကတစ်ခုကတော့ Miyake နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သူတွေပါ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုရိုးရှင်းသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်သုံးပိုင်း ခွဲ၍ ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
update ကို အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်;
တက္ကသိုလ်အဆင့်လူကြီးများတွင်ပြုလုပ်သောအလွန်ကျော်ကြားသောလေ့လာမှုမှတဆင့်၊ ဤသုတေသီများကဤကျွမ်းကျင်မှုသုံးခုသည်မည်သို့ဆက်နွယ်နေသည်ကိုသိသာထင်ရှားသော်လည်း ခွဲခြား၍ မရဘဲသိသာထင်ရှားစေပြီး၎င်းတို့သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအလုပ်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းပြသည်။ ဟနွိုင်းမျှော်စင် နှင့် Wisconsin ပြည်နယ်ကဒ်အမျိုးအစားခွဲခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း).
Duan နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ၂၀၁၀ တွင်သူတို့က Miyake model ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအသက်အရွယ်နှင့်အတိအကျအားဖြင့်အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အကြားလူတစ် ဦး ချင်း၌စမ်းသပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအမှုဆောင်အဖွဲ့ ၀ င်များသည်လူကြီးများတွင်တွေ့ခဲ့သောအရာများနှင့်ဆင်တူသည်၊ ၎င်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်နေသော်လည်းအစိတ်အပိုင်းသုံးခု (အဟန့်တားခြင်း၊ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းမှတ်ဉာဏ်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း) တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသေးသော်လည်းသိသာထင်ရှားစွာခွဲခြားနိုင်သေးသည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့သုတေသီတွေကတဆင့်လူ ၆၁ ယောက်ကိုဥာဏ်ရည်အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုပေးခဲ့တယ် Raven ၏တိုးတက်သောမက်တရစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအစိတ်အပိုင်းသုံးခုတွင်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ပါ။
ပထမ ဦး တည်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ရလဒ်များသည်မျှော်လင့်ချက်များကိုအတိအကျအတည်ပြုခဲ့သည်။ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းများ၏တိုင်းတာသောအစိတ်အပိုင်းသုံးခုသည်ဆက်နွယ်နေသော်လည်း ခွဲ၍ မရသေးပေငယ်ရွယ်သူတစ် ဦး ချင်း၌ဤကဲ့သို့ပုံတူပွားခြင်း၊ Miyake နှင့်ပူးပေါင်းသူများကလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သောရလဒ်များ
သို့သော်လည်း၊ ဒုတိယမေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပို၍ ပင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာမည်သည့်အရာများသည်အရည်အချင်းထောက်လှမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်သောရမှတ်များကိုရှင်းပြခဲ့သနည်း။
အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်စမ်းသပ်မှုအားလုံးနီးပါးသည်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိသည် (သူတို့ကလက်ကိုတွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်) ဥာဏ်ရည်စစ်ဆေးမှုတွင်ရမှတ်များနှင့်မရ။ သို့ရာတွင်တားမြစ်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့အကြားအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုအတိုင်းအတာအတွက်တန်ဖိုးများကိုပြုပြင်ခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးမှသာအရည်အသိဥာဏ်နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်နေခဲ့သည် (၃၅%ခန့်ရှင်းပြသည်။ )
စာရင်းအင်းများမကြာခဏဆက်စပ်နေသော်လည်း၊ ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်များသည်သီးခြားသီအိုရီတည်ဆောက်မှုနှစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်ပေါ်လာသည် အနည်းဆုံး (သို့) အနည်းဆုံးတည်ဆောက်မှုတစ်ခုကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသောစမ်းသပ်မှုများသည်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များကိုအမှန်တကယ်တိုင်းတာပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်၊ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အနီးကပ်အုပ်ချုပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်မရ။ သို့သော်မိမိကိုယ်ကိုမလှည့်စားမီမေးခွန်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည် (နိမ့်ကျသောမှတ်ဥာဏ်သည်အသိဥာဏ်နိမ့်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုယူဆရသည်) ၎င်းသည် "ပျမ်းမျှ" များ မှလွဲ၍ အခြားနမူနာများတွင်အရာများသည်သိသိသာသာရှုပ်ထွေးလာသည်ကိုထည့်စဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သီးခြားသင်ယူမှုမမှန်မှုများတွင်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဥာဏ်ရမှတ်များသည် IQ နှင့်အပြင်းအထန်ဆက်စပ်မှုမရှိပေမရ။ ထို့ကြောင့်ဤသုတေသနမှအချက်အလက်များသည်အတွေးများအတွက်အရေးကြီးသောအစာအဖြစ်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်၊ ကောက်ချက်သို့အပြေးမသွားဘဲအလွန်သတိကြီးစွာထားရန်အရေးကြီးသည်။
ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာဘာလဲ။ IQ ဘယ်လိုစမ်းသပ်သလဲ
ထူးချွန်သောကလေးများ - ဉာဏ်ရည်နှင့်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားခွဲခြားပါ
အသိဉာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်။ ။
တေးဂီတကိုလေ့လာခြင်းကသင့်ကို ပို၍ ဉာဏ်ကောင်းစေသလား။
Duan, X. , ဝေ, S. , Wang, G. , & Shi, ဂျေ (2010) ။ အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းနှင့်ထောက်လှမ်းရေးအကြားဆက်နွယ်မှု စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံ, 52(4), 419 ။
Giofrè, D. , & Cornoldi, C. (2015) ။ တိကျသောသင်ယူမှုမသန်စွမ်းသောကလေးများအတွက်ဥာဏ်ရည်တည်ဆောက်ပုံသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားသည်။ ထောက်လှမ်းရေး, 52, 36-43 ။
အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ, ထောက်လှမ်းရေး, ထောက်လှမ်းရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများ, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ထောက်လှမ်းရေး, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့် IQ, qi